एक बर्षभित्र सबै वडामा सडक यातायात पुग्छ... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
एक बर्षभित्र सबै वडामा सडक यातायात पुग्छ…
दाङको बबई गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भुवनेश्वर पौडेलसँग चुनावी अनुभवसँगै भावी योजनाबारे पत्रकार प्रेमबहादुर राम्जाले गरेको कुराकानीः
तपाई बबई गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा विजयी भएपछि बबईको विकासका लागि योजना बनाई रहनुभएको छ ?
बबई गाउँपालिकाको विकास निर्माण तथा कर्मचारी ब्यबस्थापनका लागि सरकारले २९ करोड ३८ लाख बजेट स्वीकृत गरेको छ । नौँ करोड कर्मचारीहरुको तलव भत्ताका लागि बजेट प्राप्त भएको छ भने २० करोड रुपैया बबई गाउँपालिकामा हुने विकास निर्माणका लागि बजेट प्राप्त भएको छ ।
यसबाहेक गाउँपालिकाले आन्तरिक रुपमा उठाउने राजश्वको लेखाजोखा भएको छैन । बबईमा राजश्व संकलनका लागि मापदण्ड पनि तयार पार्ने गरी राजश्व परामर्श समिति गठन भएको छ । राजश्वबाट प्राप्त रकमले पनि विकास निर्माणका लागि योजना निर्माण र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । हामीले निर्वाचनको समयमा धेरै प्रतिबद्धता गरेका छौँ । प्रतिबद्धता गरेका विषयलाई ध्यान दिएर काम गर्नेछौँ ।
अहिले हामीहरु गाउँपालिकाका बस्तीहरुमा पुगेर योजना छनौट गर्ने कार्य सुरु गरेका छौँ । हामीहरुले निर्वाचित भएको छोटो समयमै निती, बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने भएकाले यस कार्यमा सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
निर्वाचनको समयमा प्रतिबद्धता गरेका योजनाहरु टोल बस्तीबाट छनौट भएका छन् ?
वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म टोल तथा बस्तीमा पुगेर योजना छनौट गरेका छौँ । निर्वाचनको समयमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि छनौटमा परेका छन् । जनताहरुले पनि प्रतिबद्धतालाई बढी ध्यान दिएका छन् । सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका योजनाहरु छनौट गरीरहेका छन् ।
निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेका योजनालाई पुर्ण बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । योजना छनौट कार्यमा सबै जनताले हामीलाई सहयोग गरीरहेका छन् । हाल स्थानीयले प्रतिनीधिले के काम गरीरहेका छन् भनेर ध्यान दिएका छन् ।
हामीलाई बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छैन । विकासको बजेट छुट्याउदा कसरी छुट्याउने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । विषयगत कार्यालयसंग समन्वय गरेर बजेट बाँडफाँड गर्ने तयारी गर्दैछौँ ।
गाउँपालिकामा रहेका सात वटै वडा कार्यालय स्थापना भए ?
हामीले आजका दिनसम्म ६ वटा वडा कार्यालय स्थापना गरेका छौँ । कर्मचारी अभावका कारण वडा कार्यालय सञ्चालनमा समस्या रहेको छ । जिल्लामा रहेको कर्मचारी ब्यबस्थापन समितिलाई कर्मचारीका लागि ताकेता गरेका छौँ ।
कर्मचारी अभाव भए पनि हामीले वडा कार्यालयबाटै सेवा दिने प्रयास गरेका छौँ । तत्काललाई एउटा सचिवबाट दुई वडाको जिम्मेवारी दिएका छौँ र उहाँहरुले हामीले दिएको जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।
बबई गाउँपालिकामा कर्मचारी ब्यबस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ ?
बबई गाउँपालिकालाई सबैको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । कर्मचारीहरुले बबई गाउँपालिकालाई विकट क्षेत्रको नजरले हेरेका कारण कर्मचारी ब्यबस्थापनमा समस्या आएको छ । जिल्लामा रहेको कर्मचारी ब्यबस्थापन समितिलाई पहिलो प्रथामिकता दिन आग्रह गरेका छौँ ।
राज्यले बबई गाउँपालिकामा समयमै कर्मचारी खटाउने सक्यो भने राम्रो भयो । हामीहरुले पर्खिने भनेको गाउँसभासम्म मात्रै हो । राज्यले समयमै कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न सकेन भने हामी आफै कर्मचारी भर्ना गर्छौ हामीले एक बर्षमा गर्ने काम धेरै छन् । राज्यको भरमा हामी कार्यक्रम अवरुद्ध पार्न सक्दैनौँ कर्मचारी नभएको बहानामा ।
बबईका १ र ७ नम्बर वडा अलि विकट छन् ती वडालाई विकासको बाटोमा कसरी डोर्याउने योजना छन् ?
बबई गाउँपालिकामा रहेका सात वटै वडाहरुमा सडक सञ्जाल पु¥याउने तयारी गरेका छौँ । वडा नम्बर १ र ७ का केही बस्तीमा नियमित रुपमा यातायातका साधानहरु पुग्न सकेका छैनन् । बबई गाउँपालिकाका विकट बस्तीमा यातायातका साधन पु¥याउने प्रयासमा छु । जसरी पनि अर्को बर्षासम्म सडक पुर्ण रुपमा निर्माण हुन्छन् ।
सबै वडामा सडक यातायातका लागि प्रसस्त बजेट पास हुन्छ । असोज÷कार्तिक महिनादेखि काम सुरु गरी बैशाखमा काम सम्पन्न गरिन्छ । सबै वडाहरुमा हरेक किसिमका मौसममा यातायातका साधन सहज रुपमा पुग्छन् । यस्तै गाउँपालिकाका ६ वटा वडालाई छुने गरी चक्रपथ निर्माण गरिन्छ । चक्रपथ निर्माणका लागि तीन बर्ष समय लाग्छ । चक्रपथको नक्सा पनि कोरेका छौँ ।
खानेपानी र सुकुम्बासी समस्या समाधान कहिलेसम्म हुन्छ ?
बबई गाउँपालिकामा सुकुम्बासी र खानेपानीको धेरै समस्या रहेको छ । हामीहरुले छिट्टै निती तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने भएकाले बबई गाउँपालिकामा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नितीगत रुपमा केही निर्णय गछौँ । स्थानीय तहबाट हुने खालका निर्णयमा हामी पछाडी पर्दैनौ । केन्द्रीयस्तरबाट गर्नुपर्ने कामहरु हामीहरुले पहलका लागि ध्यानाकर्षण गर्नेछौँ सुकुम्बासीका विषयमा ।
खानेपानीका प्रसस्त मुहान भए पनि ब्यबस्थित गर्न सकेका छैनौँ । हापुरे, पञ्चकुले, शिबशक्ति, चिसापानीलगायतका खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । ती खानेपानी आयोजनाहरु पुर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेमा अधिकांशको घरमा धारा पुग्छ । सबैको घरमा खानेपानी पु¥याउन जरुरी छ पानीले सरसफाईमा सहयोग पुग्छ ।
खानेपानी समस्या समाधानका लागि जिल्ला खानेपानी डिभीजन कार्यालयसंग समन्वय गरेर हामीहरु अरु खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि योजना छनौट गछौँ । त्यसका लागि बजेट ब्यबस्थापन पनि गर्ने छौँ ।
बबई गाउँपालिकाको केन्द्र सारेको भन्ने सुनिन्छ नि, किन सार्न पर्यो ?
गाउँपालिकाको केन्द्र राख्नका लागि १० विगाहा जग्गाको आवश्यकता पर्दछ । हामीले कार्यपालिका बैठकबाट गाउँपालिकाको केन्द्र हापुरे सार्ने भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ । आउने गाउँसभामा हामीले हापुरेमा केन्द्र सार्ने निर्णय हुने छ ।
खासगरी बबई गाउँपालिका केन्द्रको केन्द्र हापुरे नै हो । हापुरेलाई केन्द्र बनाउने विषयमा सबै सहमत हुनुहुन्छ । साउन २० गतेभित्रै हामीहरुले नितीगत रुपमा निर्णय गरेर केन्द्र सार्नका लागि पहल गरेका छौँ ।
गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई केन्द्र सरकारले पनि सदर गर्छ । जनताको भावना अनुसार हामीहरु गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने तयारीमा रहेका छौँ । यसमा ९० प्रतिशत जनताको सहमति छ । हामीले निर्वाचनको समयमा पनि यही घोषणा गरेका थियौँ । – नेपालीपत्रबाट साभार